Archive du 20181001
Marc Ravalomanana Efa mipetrapetraka ny fanarenam-pirenena
Tontosa soa aman-tsara ny andron’ny sabotsy 29 septambara teo tany Parisy tao amin’ny Le Millenaire any Savingny-Le-Temple ny fihaonan’i Marc Ravalomanana sy ny mpila ravinahitra any Frantsa sy Eoropa.
Fano Rakotondrazaka-CENI « Mila mahafantatra tsara ny fepetra efa noraisina ny vahiny »
Tsy mihemotra intsony fa raikitra ny fifidianana. Tonga tsikelikely eto amintsika ny mpanara-maso fifidianana avy amin`ny vondrona iraisam-pirenena, vondrona eoropeanina, SADC,…
Vondrona Eoropeanina Handefa mpanara-maso fifidianana miisa 100
Antomotra ny fifidianana. Mijery akaiky ny fikarakarana sy ny fizotran`ny fifidianana ihany koa ny vondrona eoropeana ka mpanara-maso vahiny manodidina ny 100 no hiditra an-tsehatra.
Antoko Fanorolahy Hanohana an’i Marc Ravalomanana
Hanohana tsy misy fepetra ny Kandida Marc Ravalomanana, laharana faha-25 ny antoko Fanorolahy, tarihin’ny filoha nasionaliny Randrianary José amin’ny fifidianana izay ho filoham-pirenena hotanterahina ny 7 novambra ho avy izao.
Ekipan’ny Valimbabena “Manome vahana vitsy an’isa ny rafitra ankehitriny”
Nanamafy tamin’ny antso an-tariby ny sabotsy teo ny avy eo anivon’ny mpandrindra ny fampihelezan-kevitry ny kandida ho filoham-pirenena,
Pety Rakotoniaina “Heverin-dRatsirahonana sy Rajoelina fa gidro ny gasy
Nanao fanambarana tetsy amin’ny foiben’ny Hetsi-bahoaka ho an’ny tena fanovana sy ny fanorenana ifotony tetsy Antaninandro i Pety Rakotoniaina sy ireo mpiara-dia aminy ny sabotsy teo.
Ntsay Christian Tsy marin-toerana
Loharanom-baovao iray no nahenoana fa tsy ho ela ary mety amin’ity herinandro ity ihany dia hisolo fanindiminy indray ny filohan’ny governemanta tato anatin’izao repoblika faha-4 izao.
Hery Rajaonarimampianina “Izaho no manana miaramila be indrindra”
Tsy mitsitsy vola aman-karena i Hery Rajaonarimampianina amin’izao fotoana izao, ka manao izay fomba rehetra hahalany azy indray ho filoha.
Krizy politika 2009 -2013 Nampitotongana tanteraka ny toekaren’i Madagasikara
Faha-4 lehibe amin’ireo Nosy eto amin’izao tontolo izao i Madagasikara.
Antoko PLD sy Saraha Rabeharisoa Nandalo tao Moramanga ny fifaninanana "Dance Battle"
Mbola mitohy hatrany ny fitetezam-paritra izay ataon'i Saraha Rabeharisoa, kandidà filohan`ny Repoblika mitondra ny laharana faha-9 sy ny antoko PLD amin'ny fikarakarana ny fifaninanana "Dance Battle", ka ny tanoran'ny faritra Moramanga no nandray anjara tamin'ny sabotsy faha 29 septambra teo tao amin'ny kianjan'ny 1947.
Inona ary ity taitaitra be ity ry Jean aa? Sao dia heverinao fa kilalaon-jaza ary ity fiainam-pirenena ity ka hoe tsy maintsy hifanaraka amin’izay revinao daholo no ataon’ny olona ?
Biraom-panjakana ao amin’ny faritra atsinanana Sady tsy ampy no tsy misy fitaovana informatika
Tsy misy fitaovana informatika na iray aza ireo birao fiasan’ny mpiasam-panjakana ao amin’ny faritra atsinanana. Fantatra io nandritry ny fitsidihan’ny minisitry ny asam-panjakana sy ny fampananan’asa, Holder Ramaholimasy na Pierre Holder, tany an-toerana ny zoma sy sabotsy teo.
Ambalavato Antsirabe Nirehitra ny fitahirizan-tsoliky ny Jirama
Nitrangana zava-doza indray ny tanànan’antsirabe ny alin’ny sabotsy 29 septambra 2018 lasa teo, tokony ho tamin’ny 7 ora sy sasany tany ho any.
Fifaninanana Asief nasionaly Mpiasam-panjakana 9000 no tonga any Toamasina
Na dia efa nanomboka tamin'ny alakamisy 27 septambra teo aza ny fifaninanana sasantsasany amin'ny hetsika fitaizam-batana ho an'ny mpiasam-panjakana Malagasy Asief "'
Telma Coupe de Madagascar Tsy vita hatramin’ny farany ny lalaon’ny CNaPS Sport sy ny ELGECO Plus
Ny AS Adema hatreto no efa fantatra fa hiatrika ny lalao famaranana amin’ny Telma Coupe de Madagascar rehefa nandresy ny USCA Foot tamin’ny 2 no 1 taorian’ny fanalavam-potoana omaly tetsy amin’ny kianjaben’i Mahamasina.
Sokafy ny mason-tsaina amam-panahy
Manomboka hiditra amin’ny tena lalao isika amin’ity fifidianana ity. Andro sisa isaina satria amin’ny herin’ny anio no hanomboka ny propagandy, ka dia hanao ny fara-fahaizany handresy lahatra ny olom-pirenena mpifidy ny kandida tsirairay avy, izay miisa 36.
Fitohanan’ny fiara eny Ambohibao Hivaha tsy ho ela ny olana
Ankoatra an’Itaosy dia anisan’ny toerana be fitohanana indrindra sady mampitaraina ny maro ny fiakarana mihazo an’i Ambohibao raha handeha ho any Ivato.
Fikambanana “Diaraika” an’i Narson Rafidimanana Nanao ny zaikabeny voalohany
Ny sabotsy manontolo andro teo no natao tao amin’ny efitrano malalaky ny sekoly teknika “Camp” Mangarano Toamasina, ny zaikabe voalohan’ny fikambanana sosialy “Diaraika” izay tarihan’Atoa Rafidimanana Narson, minisitra teo aloha.
Taom-baovao Iraisan'ny Malagasy 2019 Tanjona ny hankatoavan'ny fanjakana azy ho andro tsy fiasana
Ho an’ny Malagasy rehetra ny fankalazana iraisana ny Taom-baovao izay efa niditra tamin’ny fanamarihana fanindroany tamin’ity taona ity. Tanjona ny hankalazan’ny isan-tokantrano toy ireo fety
MATY TAO AMIN’NY VIOLON
Lasa resa-be ankehitriny ny fisian’ilay lehilahy iray izay maty tao anatin’ny “violon” an’ny zandarimaria ao Sambava.
SEKOLY SAINT VINCENT DE PAUL AMBATONILITA
Tsy miverina amin’ny fanapahan-kevitra efa noraisiny ny Foibem-pitantanana ny sekoly katolika na ny DIDEC fa tsy maintsy hakatona ny sekoly Saint Vincent de Paul Ambatonilita.
Sehatra fambolena eto Madagasikara Afaka hiteraka fampandrosoana raha….
Amin’ny 60 tapitrisa ha amin’ny velaran-tanin’i Madagasikara dia mbola misy 18 tapitrisa ha be izao ny tany mamokatra kanefa tsy voavoly.
Olona mpandainga sy mpamadika palitao Atosiky ny fitiavam-bola, hoy ny psikôlôgy
Fomba fanao ratsy maro no mihamahazo vahana eto amintsika tato ho ato. Ankoatra ny famadihana palitao hataon’ireo mpanao politika mba hiarovany ny tombontsoany manokana dia mirongatra ihany koa ny famafazana lainga sy ny fampirafesana.
Miparitaka eny an-tsena ny manga Tokony hohanina madio foana
Manomboka miparitaka eny an-tsena tsikelikely ny vokatra manga efa ho tapa-bolana mahery izao.
Zava-pisotro misy etona Manomboka mahazo vahana eto amintsika
Mihamahazo vahana tsikelikely eto amintsika amin’izao ny zava-pisotro misy etona.
Fampandrosoana an’i Madagasikara Mila ezaka amin’ny lafiny maro
Ambony be ny tahan’ny tsy fananan’asa eto Madagasikara amin’izao fotoana. 400 000 hatramin’ny 500 000 eo ho eo ny tanora mivoaka amin’ny fampianarana isan-taona saingy tsy maharaka ny tsenan’ny asa ka mahatonga ireo tsy an’asa marobe.
« Caisse d’Epargne de Madagascar » Manana mpanjifa 1,5 tapitrisa manerana ny nosy
Nitohy tany Toamasina ny fankalazan’ny orinasa “Caisse d’Epargne de Madagascar” ny fankalazany ny faha-100 taona niho\_renany .